Pilot Vecihi Hürkuş nọ n'ụgbọ elu nke emepụtara na studio nke ya na Ankara enweela ike ime obere njem na Turkey. N’afọ 1932, Selahattin Reşit Bey na ndị otu ya, injin na onye na-ebugharị nke ndị injinia ndị Cemiyet zụrụ ná mba ọzọ. [More ...]
Companylọ ọrụ ahụ, nke natara nkwenye akara Izmir-Aydın na 28 Mee 1857 na akụkọ ntolite, ka ndị otu Britain guzobere Ottoman Railway site na Izmir ruo Aydin.
Grey nke ukwuu Pirelli dọrọ gị aka na ntị ka ị lelee taya gị tupu ịmalite ịmalite n'enweghị nsogbu ọ bụrụ na ụgbọ ala gị akwagharịghị ogologo oge. Nwere ike ịme nyocha ụfọdụ, mana ụfọdụ n'ime ha nwere a [More ...]
Ọ bụ ezie na anakọtara data gbasara ịnya ụgbọ ala site na 2000 ruo 2019, ọ tụgharịrị na ọ dị ihe dị ka otu ijeri anyịnya igwe na ụwa. Ọ bụ ezie na edochaghị ya anya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara (nde 1) nke ịnyịnya ígwè dị na China [More ...]
Nnukwu tolọ Ọrụ Na-akwado Ọrụ na-akwado ụlọ ọrụ iji kwado ụdị ndị na-ewe ha n'ọrụ ma na-eme ka mmekọrịta ụlọ ọrụ sie ike. Dabere na data nke Institutelọ Ọrụ ahụ, azụmahịa ndị nwere ọdịbendị ntụkwasị obi nwere okpukpu atọ nke nloghachi akụ na ụba ha karịa ndị asọmpi ha. [More ...]
Ọ bụ ezie na ịgba ọgwụ mgbochi ọgwụ na ọmụmụ ọgwụ na-aga n’ihu n’ụzọ zuru ezu maka nje corona (COVID 5,5), nke metụtakwara ụwa ma bufere ihe ruru nde mmadụ 19 ruo taa, ndị sayensị [More ...]
ARUS, onye isi ihe nnochite anya mpaghara Rail Sistem, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na EU COSME oru ngo. Otu egwuregwu nke na-anọchite anya nzukọ ngwa Microsoft nke Turkey sitere na Spain yana arus RAILGRUP, MAFEX si Denmark censec bụ DITECF nke Italytali, France. [More ...]
Na Bursa, okporo ụzọ a na-ejigideghị ya ruo ọtụtụ afọ n'ihi ịdị ukwuu nke okporo ụzọ erutela nkasi obi n'ihi usoro iwu. N’ọrụ a na-arụ naanị n’oge mbido, 28 kilomita nke ụzọ ruo taa, ihe ruru puku tọn iri puku asatọ [More ...]
N'iji oge ngwụcha oge gara aga, IMM gara n'ihu na-edozi okporo ụzọ ya, mmezi ya na nrụpụta mgbanye ọkụ na ngalaba ahụ. Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, ndị ọha mmadụ mara dịka "ụzọ ọnwụ" [More ...]
Ndi isi obodo Izmir bidoro idebe ihe na - adighi emebi na alakụba a ga-emeghe na Fraịde kwekọrọ na okirikiri nke Ministrị nke ime. N’ikwekọ na okirikiri nke Ministry of Internal Affairs nke Izmir Obodo ukwu, alakụba a ga-emepee maka ofufe na Fraịde, 29 Mee. [More ...]
Enweela nde 13 2 puku 684 nke nde mmadụ abụọ nde 390 puku 9 na Onye enyemaka EBA kemgbe 801 Eprel. 240 nke ndị ọrụ bụ EBA n'ime sistemụ nwere ọgụgụ isi mepụtara site na injinia Turkey. [More ...]
Onye Minista oru ugbo na oke ohia Bekir Pakdemirli, dị ka Osimiri Tigris ma mee ụdị ahụ na-agbakọ mmiri mgbochi mmiri na Turkey na mmepụta kachasị ike Europe iji malite igosipụta Cetin Dam. [More ...]
Minista ahia ahia Ruhsar Pekcan kwuru na ụlọ ọrụ ndị ahụ gụnyere itinye aka na saịtị e-commerce, isonye na ndị nnọchi anya ahia ahia na egwuregwu mebere, na ịhazi mmemme egwuregwu. Mkpebi Onye isi ala na Nkwado Ọrụ Dijitalụ na Ntinye Ahịa [More ...]
Onye Minista Ezinaụlọ, Ọrụ na Ọrụ Ndị Ọrụ Zehra Zümrüt Selçuk kwuru na enyere ndị 6 nwere ọrịa na-adịghị ala ala aka enyemaka ego mgbe niile, yana ndị ọrụ 564 2 na-adabere na ngwaọrụ ahụ n'ihi ọrịa ha na-adịghị ala ala. [More ...]
Mịnịsta Selçuk: 'Anyị na-akwadozi akwụkwọ nyocha nke mba maka ndụmọdụ na ezinaụlọ'; Onye na-ahụ maka ezinaụlọ, ndị ọrụ na ndị ọrụ na-elekọta mmadụ Zehra Zümrüt Sel announceduk kwupụtara na ha ga-ewebata usoro nke Iwu Asọmpi Iko Mba nke a ga-abụ iwu maka ndụmọdụ ndị ezinaụlọ. Ezinaụlọ [More ...]
n'okpuru ụdị ọhụụ nke ntiwapụ nke ọrịa coronavirus n'oge mba ahụ na-ebuso ime ihe ike ụlọ na ụmụ nwanyị gburugburu ụwa iji belata ihe omume ndị a na Turkey. O mere n'ime ọnwa anọ nke afọ a [More ...]
TCDD Tasimacilik kwụsịrị ụgbọ elu YHT na March mgbe amachibidoro njem ndị a na-alụ ọgụ na mgba megide ọrịa coronavirus. Willgbọ elu ahụ ga-amaliteghachị na Tọzdee, Mee 28. Dika ozi banyere Olcay Aydilek si Habertürk; “Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, [More ...]
Izu gara aga… Ndị ọkwọ ụgbọala na-eji mgbanaka mgbanaka zutere ọrụ owuwu dị ịtụnanya. Nke a bụ ọrụ iji mezue ngalaba ahụ n'etiti okporo ụzọ ahụ, nke na-efu site na viaduct, nke ga-ebufe okporo ụzọ ụgbọ elu dị elu site na Çağlayan Village dị n'okporo ụzọ mgbanaka dị na mpaghara Osimiri Oxygen dị. Nke ukwuu… N'ihi ọrụ bidoro na-egwu mmanụ n'okporo ụzọ ahụ, gburugburu [More ...]